Golaha wakiillada Puntland oo ansixiyay miisaaniyad saggaal bilood ah oo dhaqangelaysa Isniinta – Kalfadhi
Golaha wakiillada Puntland oo ansixiyay miisaaniyad saggaal bilood ah oo dhaqangelaysa Isniinta
Golaha wakiillada Puntland ayaa maanta si buuxda u ansixiyay miisaaniyadda dowladda ee saggaalka bilood ee sannadkan ka haray oo dhan $54,000,450, taas oo wasaaradda maaliyaddu ay golaha horgaysay sabtidii hore.
Kulanka 24raad ee kalfadhiga 43aad ee maanta waxaa fadhiyay 40 mudane, waxaana miisaaniyadda ogolaaday isla markaasna ansixiyay 38 mudane.
Waxaa jiray miisaaniyad saddex bilood ah oo goluhu ansixiyay bishii Jannaayo. Guud ahaan miisaaniyadda dowladda Puntland ee sannadka 2019 ayaa noqonaysa $72,000,600.
Sabtidii, wasiirka maaliyadda Xasan Shire Cabdi iyo saraakiil sar sare oo wasaaradda ka tirsan ayay wakiiladu su’aalo badan ka weydiiyeen arrimaha dakhliga, Is-dhinka miisaaniyadda, isticmaalka madaxyadda qaarkood oo su’aal geliyeen, canshuur dhaafka iyo canshuuraha aan weli la qaadin.
Miisaaniyaddan waxaa laga soo min-guuriyay tii sannadkii 2018 ay dowladdu ku shaqaysay waxna lagama bedelin duruufo dhaqaale yari oo jira darteed, sida uu golaha wakiillada u sheegay wasiirka maaliyaddu.
Qorshaha dowladda cusub waxaa ku jirta in la dardargeliyo canshuuraha berriga, kuwa dekedda iyo in xal loo helo dhoofka xoolaha oo dhaqaale xoog leh laga heli jiray balse hoos u dhacay sannadihii u dambeeyay, taas oo saamayn ku yeelatay miisaaniyadda.
Miisaaniyaddan waxay dhaqangelaysaa 1da Abriil, 2019 oo ah Isniinta.
Golaha wakiillada oo ka soo noqday fasax muddo bil ah ay ku maqnaayeen ayaa shaqada dib u bilaabay sabtidii toddobaadkii hore, waxayna tobankii cisho ee ina dhaafay ka shaqaynayeen arrinta miisaaniyadda.
Sanatar Xuseen: Xaalad Deg Deg ah waxaa ka dhalan karta in leysku maxkamadeeyo